गोजिभरि पैसा नहुन्जेल लभ गर्न मन लाग्दैन - साप्ताहिक
यी जोक्स नक्कल गरेजस्ता लाग्छन् (फेसबुक फन्डा) । आफ्नै मौलिक जोक्स भैदिए राम्रो हुन्थ्यो ।
मन छुने तथा अहिलेको फेसबुके माया दर्साउने धेरै तन्नेरीले भोग्ने प्रसंग समेटिएको रहेछ (कथा : च्याटपछिको भेटघाट) । कथा निक्कै राम्रो लाग्यो ।
आज समातेको चोरलाई भोलि छोड्ने चलन छ (अपराध : उपत्यकामा चोरका आठ ग्याङ) । यसरी कसरी घट्छन् र चोर ? कडा सजायको प्रावधान हुनुपर्छ अनि मात्र अपराध कम हुन्छ ।
आजकालका छोराहरूले बुबा–आमालाई सताएको सर्वविदितै छ (बुहारीका लागी जुहारी) । राजेशपायल राईले त्योभन्दा राम्रो के गर्न सके र ? बुवा–आमालाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ ।
हामी परदेशीहरूको एउटै पीडा त हो नि (कथा : बिरालो, दसैं र छोरो) । चाड पर्वका बेला घर जान मिल्ने होइन । विदेशमा बसेर जति कमाए पनि काम गर्नैपर्छ ।
मल्टिप्लेक्समा जाने खुट्टालाई सिङ्गल स्क्रिनमा जान कसैले रोक्न सक्छ ? (मल्टिप्लेक्समा रेखा) ? जहाँ राम्रो चलचित्र चल्छ त्यही गएर हेरिन्छ नि ।
हाम्रोतिर त तीजमा चर्खेपिङ बनाउने चलन छ (हराउँदै काठैकाठको चर्खे पिङ) । यसरी चर्खेपिङ बनाएको ठाउँमा चेलीबेटीहरू जम्मा भै नाच्ने– गाउने काम गर्छन् । गाउँका युवाहरूले चेलीबेटीहरूलाई पिङमा बस्न लगाई पिङ मच्चाइदिन्छन् । चेलीबेटीहरूले पिङ मच्चाउने युवाहरूलाई फलफूल एवं प्रसाद दिन्छन् । यो चलन अहिलेसम्म यथावत् छ ।
मगर केटो पवन
त्यही त भन्या आजकाल गोजिभरि पैसा नहुन्जेल लभ गर्न नि मन लाग्दैन (कथा : लो बजेट लभ) । सम्पत्तिमा सबैको हाईहाई बिपत्तिमा कोही छैनन् दाजुभाइ ।
दिपेश काउचा, समन चौधरी
एउटा कुराचाहिं अचम्म लाग्यो (पढ्नैपर्ने सय पुस्तक) । पढ्नैपर्ने उपन्यासको सूचीमा डायमनशमशेरका उपन्यासहरूको नाम कतै देखिएन ।सरोज तुलाधर
आस्थाभन्दा ठूलो केही हुँदैन (तलेजु मन्दिरमा २१ वर्ष) ।
मिलन अमात्य राम्री गायिका मात्र होइन, विचार र व्यक्तित्वले अझ बढी राम्री हुनुहुन्छ (अन्तर्वार्ता : दर्जनौंले प्रस्ताव राखे, मैले एरेन्ज रोजें) । आउँदा दिनहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि धेरै–धेरै शुभकामना ।
दसैं त सधैं अर्थपूर्ण नै हुन्छ नि (गजुरियल : अर्थपूर्ण बनाऔं दसैंलाई) । देशको स्थितिचाहिँ कहिल्यै अर्थपूर्ण भएन । बरु त्यतातिर सोच्नु राम्रो होला ।
यस्तो कथा पढेपछि मन फुरुङ्ग हुने क्या (साहित्य : यात्रामा एउटा प्रेम) ! कथा बहुत मन छुने लाग्यो । प्रस्तुति अति राम्रो, पाठकको मनोविज्ञानसँग खेल्न सफल छ । यसले प्रेमको नयाँ परिभाषा दिन्छ ।
पढ्नैपर्ने सय पुस्तकमा केही पुस्तकका नाम गलत छन् भने केही दोहोरिएका छन् । हर्क गुरुङको मैले देखेको नेपाल हुनुपर्नेमा, मैले देखेको समाज छापिएको छ । त्यस्तै इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ दोहोरिएको पाइयो ।
प्रकाशित :कार्तिक १०, २०७३
गुदामैथुन अनी मुखमैथुनको अर्थ के हो ? यो कसरी गर्न सकिन्छ ?
हिरोइनसँग डेटिङ गर्न आएको होइन
पैसा नहुँदा काठमाडौंमा रुँदै दिन काटेकी छु
हामीले गोल गर्न थालेका छौं
खल्तीमा पैसा छैन ? नो प्रोब्लम
रेखा राप्रपामा जुहारी ट्विटरमा पुस ६, २०७३
जोसँग पैसा हुन्छ उनीहरूसँग दिमाग हुँदैन मंसिर १२, २०७३
३१ वर्षमा २५ युवतीसँग रासलीला कार्तिक १२, २०७३
मनोज गजुरेलको टिप्पणी सही हो आश्विन ९, २०७३
नेपालको कानुन माकुराको जालोजस्तो भाद्र २०, २०७३
प्रचण्डले बुझ्नु पनि पर्‍यो श्रावण २९, २०७३
मिस्टर वल्र्डसम्म पुग्नु नै ठूलो कुरा श्रावण १६, २०७३
पारस शाहको नालीबेली पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो श्रावण ९, २०७३
चर्चा कमाएपछि डाहा गर्नेहरू बढ्ने नै भए असार ३१, २०७३
सनि लियोनीको विचारसंग म सहमत छु असार २६, २०७३